PinePhone inokutendera iwe kusarudza imwe yeanoverengeka anoshanda masystem | Linux Vakapindwa muropa
Iyo PinePhone ndeye smartphone inoshambadzirwa nevakagadziri vayo senge yakavhurwa sosi. Chinangwa chekugadzirwa kwayo hachisi chekungopa chete runhare rweLinux kupedzisa vashandisi, asiwo kugadzira musika wechigadzirwa chakadai, pamwe nekutsigira zvirongwa zvakamisikidzwa zvakanaka zvakanangana ne "Linux pane mafoni."
Imwe yePinePhone kukosha kwekutaura kuri kubvumira vashandisi kusarudza yavo sisitimu yekushandisa sezvingaitwa nemushandisi paPC. Pakutanga gore rino, kwaive nekutaura kwePostmarketOS, kugoverwa kweLinux iyo inokura pane akasiyana mafoni uye zvishandiso zveApple.
Kunyangwe kune rimwe divi chiteshi cheLuneOS chiri kuvandudzwa, inova webOS-based operating system. Timu iri kumashure kweSailfish OS iri kushandawo kuti iunze kugovera kwayo kubva kuLinux kuenda kuPinePhone chikuva.
Imwe yemaitiro anokwanisa kusvika kuchikwata ndiUbuntu Kubata, sezvo timu yekusimudzira yakazivisawo bvunzo neiyi system.
"Iko kushanda kwekutanga kwefoni (kufona uye mameseji) kwatova kushanda kune akati wandei masisitimu anoshanda.
Zvakatora nguva diki kuti ishandise nharembozha nekuda kwedhigi muSIM slot wiring yeiyo 1.1 uye 1.2 yekuvandudza kits.
Izvi zvakagadziriswa neadapter uye iyo yambotaurwa 2.0 yekuvandudza kit haichadi iyo adapta.
Ndakaedza PostmarketOS, Maemo Leste, uye LuneOS mumavhiki apfuura uye vese vakaita kufambira mberi kukuru pasina nguva.
Hunhu hukuru hwesisitimu yega yega yekushandisa hwakasiyana, izvo zvinoita kuti zvinakidze kuyedza iyi yekutanga mifananidzo.
Semuenzaniso, Maemo Leste akagonesa mameseji, nepo PostmarketOS yakwanisa kumhanyisa kamera (PMOS Martijn yakatoburitsa ~ ~ 2 awa rukova rwuri kurarama kubva ku SDK) uye LuneOS inopa yakanyanya kutsetseka mushandisi interface ine akawanda maapplication anomhanya.
Kunyangwe ese ma sensors uye kunyangwe maspika ari kushanda izvozvi zvakare, saka zvinhu zvinonyatso kuungana pamwe nekukurumidza kumhanya.
Sezvandambotaura mune yaMay yekuvandudza, ivo vanogadzira ese akasiyana masystem anoshanda anoshanda pamwechete uye ese matsva mashandisirwo maficha anokurumidza kuwana nzvimbo yavo mune ese system system. Ini ndichakamirira kuyedza akasiyana masystem.
Anotaura Lukasz Erecinski
Iko kugona kwemushandisi kusarudza yavo sisitimu inoshanda inobvumira PinePhone kumira kubva pane zvakafanana zvinopihwa.
Zvechokwadi, kusunungurwa zviri pamutemo kweLibrem 5 kunotarisirwawo , yeGNU / Linux smartphone uye ichazongopa PureOS (yakabva mukuparadzirwa kweDebian) senzira yekushandisa.
Iyo PinePhone chishandiso chesarudzo kune vakawanda vakavhurika sosi vanofarira vanoona muchirongwa ichi vaine smartphone iyo yavanogona kuchinja kana kugadzirisa sezvavanoda.
1 PinePhone Zvimiro
1.1 Pane atove maapplication ePinePhone?
Iyo Allwinner A64 system-on-chip yakasangana kune Mali 400 MP2 giraidhi yekugadzirisa unit
2 GB yeLPDDR3 RAM
5.95-inch LCD skrini ine resolution ye1440 x 720 pixels
16GB eMMC kuchengetedza
bootable microSD kadhi
5 megapixel yekumashure kamera uye 2 megapixel yekumberi kamera
yekufambisa system: GPS, GPS-A, GLONASS
3000 naRa bhatiri.
Pane atove maapplication ePinePhone?
Ichi chikamu icho vagadziri vasingaite kunge vari kugadzirisa panguva ino. Chaizvoizvo, iri ndiro dambudziko rauri kutarisana naro kana uchiedza kupa akasiyana Linux masystem pane mafoni.
Kushaikwa kweiyo ecosystem yezvakapihwa maficha, senge Android uye iOS.
Kuwedzera kune izvi, HTML 5 zvishandiso ndeimwe nzira sezvakaziviswa neavo vanotarisira chirongwa cheLibrem 5. Mushure meizvozvo, zvese zvinoenderana nekugona kwevatungamiriri vechirongwa kuti vabatanidze kuyedza kwenharaunda: mamiriro asina akambokwanisa kuzadza kusvika parizvino.
Izvo zvakarongerwa kuvhura prototype yePinePhone yemwedzi waNyamavhuvhu wegore razvino, isina yakasimba chitoro cheapp panguva iyoyo.
Pakupedzisira zvinotarisirwa kuti mutengo wePinePhone unofanirwa kunge uri madhora zana nemakumi mashanu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » PinePhone inokutendera iwe kusarudza imwe yeanoverengeka anoshanda masisitimu